नेटफ्लिक्समा स्पेनिश भाषा चलचित्रहरू – Vocre
हेर्दै स्पेनी भाषा चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरू नेटफ्लिक्स मा एक हो भाषा सिक्ने उत्तम तरिकाहरू - र संस्कृति को बारे मा एक सानो. निश्चित, तपाईं भर्खरै उपशीर्षकहरू खोल्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको मनपर्ने अंग्रेजी-भाषा चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तर यो हेर्नेजस्तो मात्र होईन कि भाषा चम्काउन अनुमति दिँदछ.
नेटफ्लिक्समा हास्य स्प्यानिश भाषा विशेष
नेटफ्लिक्स कमेडी स्ट्यान्ड-अप विशेष खेलमा पैसा कमाउँदैछ (पहिले हास्य केन्द्रिय र HBO द्वारा हावी). यी कार्यक्रमहरू सिक्नको लागि एक उत्तम तरिका हो साझा स्प्यानिश वाक्यांश. तपाईंको मनपर्ने अंग्रेजी-बोल्ने कमिकहरूको विशेषता हास्य विशेषको अतिरिक्त, तपाईं यी स्पेनिश भाषाका हास्य कलाकारहरूका विशेषहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ:
नेटफ्लिक्समा नाटक स्पेनिश भाषा फिल्महरू
यो मनोवैज्ञानिक थ्रिलरले थोरै महसुस गर्दछ “Rosemary’s Baby” सम्पूर्ण शैतानको अंश बिना. र यसले पतिलाई डराएको / निराश आमा बुबाको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ - आमा होइन.
लोरेन्जोको बच्चा भएपछि, ऊ सोच्न थाल्छ कि उसकी श्रीमतीले बच्चालाई उनीबाट टाढा राख्न खोजिरहेकी छिन. यो छिटो चलचित्रमा खराब मान्छे को हो भनेर भन्न गाह्रो छ. पुरानो-पुरानो प्रश्नको जवाफ दिन वाक्यांशहरू तपाईंलाई अनुवाद अनुप्रयोगमा प्लग गर्नुहोस्: गुगल अनुवाद सही छ?
यदि तपाईंले सुन्नु भएको छैन भने “Roma,” हामी केवल अनुमान लगाउन सक्छौं कि तपाईंसँग टिभी छैन. वा, एक नेटफ्लिक्स खाता.
को आश्चर्य ब्रेक आउट फिल्म 2018 को मेक्सिको सिटी को रोमानो कोलोनिया मा लिन्छ. यो घटनाहरूको एक हदसम्म काल्पनिक खाता हो कि १ summer s० को दशकमा निर्देशकको परिवारमा एक गर्मीमा भयो. सुन्दर छायांकन को मूल्यांकन को बाहेक, तपाईं यस फिल्ममा मेक्सिकोको ईतिहासको बारेमा थोरै पनि सिक्नुहुनेछ.
Soltera Codiciada (एक ब्रेकअप कसरी प्राप्त गर्ने)
मा “Soltera Codiciada,” एक युवा मार्केटिंग पेशेवर उनको लामो दूरी के प्रेमी द्वारा फ्याँकिन्छ. ब्रेकअप भन्दा बढी प्राप्त गर्न, उनीले ब्लग सुरू गर्छिन्. उनी पनि आफ्ना साथीहरूबाट अलि मद्दत लिएर छिन्. यो मनमोहक कमेडी भनेको कुनै पनि खराब ब्रेकअप - वा खराब दिनको बारेमा मात्र उपाय हो, साँच्चै.
के हुन्छ जब एक चिकित्सकको उडान ढिलाइ भयो, र उसको बिरामीहरुलाई एक अर्कासँग बस्नुपर्दैन कोठामा अप्रशिक्षित? यस गाढा कमेडीले व्यक्तिहरूको समूहको हाइलाइटहरूलाई हाइलाइट गर्दछ र तिनीहरूलाई आफैं वरिपरि घुमाउँछ.
ल्याटिन अमेरिकालाई कसरी ब्रेकब्रेक गर्ने थाहा छ. यो अँध्यारो कमेडीमा, एक महिलाले उनको मंगेतर पत्ता लगाउँछिन् उनीलाई स्थानीय सेलिब्रेटीले धोका दिँदै. उनी घरको मुटु र ब्रेकको सामना गर्न छिन् - र बस एक स्थानीय आकर्षकको साथ प्रेममा फस्न सक्छ.
बच्चाहरू स्पेनिश भाषा चलचित्रहरू
किन तपाइँका बच्चाहरूलाई वयस्कहरूको साथ स्पेनिश सिक्न प्रोत्साहित नगर्नुहोस्? बच्चाहरू नयाँ शब्द र वाक्यांशहरू लिनमा उत्कृष्ट छन्. वास्तबमा, चाँडो तपाईं आफ्ना बच्चाहरूलाई नयाँ भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ, the better.
बच्चाहरूको कार्टुनको बारेमा राम्रो खबर यो हो कि तपाईं तिनीहरूको अडियो स्प्यानिशमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंले सायद यो पनि याद गर्नुहुने छैन कि मुखहरू चरित्रहरूको साथ अघि बढिरहेको छैन।. अझै, यी तीन कार्टुन ल्याटिन अमेरिकी देशहरु मा लिन्छ, त्यसो भए यो व्यावहारिक रूपमा स्पेनीमा हेर्नका लागि बनाइएको हो जस्तो देखिन्छ.
को ब्रेकआउट डिस्ने फिल्म 2017 थियो “Coco!” अधिकांश अमेरिकीहरूले यसलाई अंग्रेजीमा हेरेका थिए, त्यहाँ एक स्पेनिश भाषा संस्करण छ. चलचित्र भेरा क्रूजमा हुने भएकोले, मेक्सिको, हामी यसलाई भाषामा हेर्ने सल्लाह दिन्छौं जुन मेक्सिकोको त्यो क्षेत्रमा बोलिन्छ - स्पेनिश.
यदि तपाईं खोज पछि मात्र 'खेल' हिट गर्नुभयो भने “Las Leyendas,” तपाईं अंग्रेजीमा यस बच्चाहरूको कार्टुन शो हेरेर सक्नुहुनेछ. अझै, यो प्रख्यात मेक्सिकन टिभी कार्यक्रम हो, त्यसैले हामी किशोर किशोरीको नामको बारेमा जान्नको लागि स्पेनिशमा जान सिफारिस गर्दछौं Leo San Juan, जो आत्मा संग कुराकानी गर्न सक्छन्.
“Ferdinand” जस्तो प्रसिद्ध छैन “Coco,” तर यसले पक्कै पनि मुटुको समान मात्रा पायो. शीर्षक चरित्र एक गोरु हो जो आफ्नो जीवनमा लड्ने बुल्फाइटरको जीवन चाहान्छ. He escapes to another ranch in rural Spain — but inevitably must faceafighter eventually.
नेटफ्लिक्समा सर्वश्रेष्ठ स्पेनिश भाषा टिभी कार्यक्रमहरू
आजभोलि, टिभी र चलचित्र बीचको भिन्नता भन्न गाह्रो छ. धेरै टिभी कार्यक्रमहरू केवल १०-घण्टा चलचित्रहरू हुन्. यदि तपाईं स्पेनिश भाषाको टिभी कार्यक्रमहरूमा डूबिन चाहानुहुन्छ, हामी यी चार सिफारिश गर्दछौं.
“La Casa de Flores,” पारिवारिक रहस्यको बारेमा नाटक
“Made in Mexico,” मेक्सिको शहरका धनी बासिन्दाहरूको बारेमा वास्तविकता टिभी कार्यक्रम
“High Seas,” एक फिल्म-Noir- शैली अपराध कहानी जुन सागर लाइनरमा घट्छ
“Narcos,” पाब्लो एस्कोबारको प्रसिद्ध काल्पनिक खाता, एक कोलम्बियाई लागुपदार्थ मालिक